Tokkummaan garbummaa hundeen buqqaasuuf malee ABO balleessuuf tokkummaa lallabamu kamiinuu nii mormina! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooTokkummaan garbummaa hundeen buqqaasuuf malee ABO balleessuuf tokkummaa lallabamu kamiinuu nii mormina!
Tokkummaan garbummaa hundeen buqqaasuuf malee ABO balleessuuf tokkummaa lallabamu kamiinuu nii mormina!
Qalbeessaa Dhangi’aatiin, Adooleessa 8,2019
Addi Bilisummaa Oromoo ABO’n tokkummaa uummata Oromoo ijaaruu keessatti gahee gita hinqabne bahateera bahataas jira. Faallaa kanaa tokkummaa saba keenya Oromoo diiguudhaan dorgomaa kan hinqabnees akka jiru uunmatni keenya Oromoon cimsee beeka. ABO’n qaamota maxxantuu garboonfataa balleessuufis ta’ee caasaa sirna garboomsaa dhabamsiisuuf tokkummaadhaan Oromoo ijaare. Tokkummaan keenya tokkummaan Oromoo dhugoomnaan egereef jireenyi Oromoo mirkanaa’aa ta’uus barsiisaa waggaa hedduu lakkoofsiiseera.
Hundaan olitti uummatni keenya eenyummaa isaan akka of himuuf akka eenyummaa isaa Oromummaa ofitti fudhatee of baru gochuu keessatti qabsoo fakkaataa hinqabne taasisuudhaan kaayyoo Oromoo of barsiisuu fudhatee sochiirra tureen mirkaneeffatee Oromoo Bahaa hanga Lixaa, Kaabaa hanga Kibbaatti akka eenyummaa isaan dhaadatu taasisee jira.
Tokkummaadhaan qabsaa’ota isaa dhabamsiisuuf utuu hintaane Oromoon tokkummaadhaan saamtota isa saaman hundeen haree dhabamsiisuuf of ijaaree qabsaa’a. Kana ta’uu warri dagatan Tokkummaadhaan ilma gudeedaakee ABO balaaleffadhu jechuudhaan akeeka OPDO’n qabatanii waggaa tokkoo oliif hojiitti jira fakkeenya biqiltuu bona hongee keessa buqqa’ee dhabbatuu akka ta’e himiifiin barbaada. Biqiltuu Bona dhaabanii qabsiisuu yaaluu fi ABO Oromoon tokkummaan ba’ee dhabamsiisa jedhanii yaaduun tokko. Lamaanuu kaayyoo galma gahu utuu hintaane kaayyoo hongeen gogee dhabamu ta’uu asumaanan hima.
Seenaa keessattillee waan ta’ee hinbeekne har’a OPDO’n maqaaf afaaniin tokkummaa lallabaa firaaf aantii, abbaaf haadha ilma irratti kakaasuu yaaluun hedduu nama raaja illee. Tibba kana abbaadhaan ilmakee bahii balaaleffadhu utuu jedhanii agarra. Maraatummaan siyyaasaa isa akkanaati. Garboomsaan dhuma jala nii maraata jechuun dhugaa ta’uu mirkaneeffannee jirra.
OPDO’n nuti Oromoodha jechaa Oromoo ajjeesaa jiru. Nuti Oromoodha jechaa mana Oromoo gubaa jiru. Nuti Oromoodha jechaa ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuraa jiru. Nuti akka qabsaa’ota Bilisummaa Oromootti waan hubannu nama tokko an Oromoodha akka jedhaa nu nyaatu utuu hintaane, qaama hojiin Oromoo ta’e biyyattii keessatti hundeen gadhaabuuf qabsootti jirra. Waan afaaniin uummata birqaansaa uummata ajjeesuu caalaa nama aarsuus ta’ee nama dallansus jira jedhee hinyaadu.
Ta’ullee mootummaan utuu dimokiraasii ajjeesee irree Qawwee ol kaafatee jiruu qaamni mootummaa tiksaa jiruuf tumsaa jirus yakka wal fakkaataa uummata keenya irratti raawwataa jiraachuu hubanna. Kanaaf qaamni kamuu dhageettii waan qabnuuf wal ijaarree Oromoo saamna, Wal ijaarree Oromoo ajjeefna jedhanii hojiitti utuu jiramuu agarra.
Mootummaanis miidiyaalee Oromoo biratti dhageettii qabaniif namoota paartii mormituu hogganan dabalatee nama dhuunfaa maqaa activistummaan socho’aa jiran walitti ida’achuudhaan tokkummaadhaan Oromoo duraa ABO ajjeefnee Oromoo saamna jedhanii hojiitti jiru. Qaamni kamuu ABO onnee saba Oromoo keessaa baasuu akka hindandeenye cimsinee kan beeknu nuti ilmaan Oromoo akeeka fokkataa kanaan mootummaan of balleessaan ala ABO balleessuu akka hindandeenye irra deebiin ibsuufiin barbaada.
Tinfa shiraan daandii qabsoo irraa kaafnee akeeka Oromoon waggoota dheeraaf qabu sana dhugoomsuun Alaabaa Oromoo gad dhaabuuf qabsoofna. Kanaaf; Tokkummaan garbummaa hundeen buqqaasuuf malee ABO balleessuuf tokkummaa lallabamu kamiinuu nii mormina! Akeekni diinaaf gantuuf galtuun tokkummaa yoo uumne ABO balleessina jedhanii hojjetaa jiranis galma gahuu matumaa hindanda’u.
Taarkaanfilee Miseensotiin Gumii Sabaa ABO har'a fudhatan nii tumsina!
Taarkaanfilee Miseensotiin Gumii Sabaa ABO har'a fudhatan nii tumsina! Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Hagayya 11, 2020…
The Unity of the Oromo Liberation Front (OLF) and the United Liberation Forces of Oromiyaa…
Tokkummaa Oromoo dagaagaa jiru kunuunfataa, warraaqsa dararee firii itti gochuuf nii qabsoofna!
Tokkummaa Oromoo dagaagaa jiru kunuunfataa, warraaqsa dararee firii itti gochuuf nii qabsoofna! Ibsa Qeerroo Bilisummaa…
The Sidama People (Ejjeetto) Eyeing Their New Regional State is Born Despite Stiff Resistances from Entrenched Interests